ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အမြင့်ဆုံး အဆောက်အဦး ၂၀ - Myanmar Builders Guide
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ဟာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရဲ့ စီးပွားရေးတံခါးပေါက်တစ်ချပ်ဖြစ်ပါတယ်။
လူဦးရေ ၆သန်းနီးပါးနေထိုင်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ မြို့ပြအဆောက်အဦးများစွာရှိပါတယ်။ မြို့ပြအဆောက်အအုံတွေထဲကမှ အထင်ကရဖြစ်တဲ့ အဆောက်အဦးတွေကို အစဉ်မျှဝေလျက်ရှိရာ ယခုအခါမှာတော့ ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးအဆောက်အအုံများကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
1. Diamond Inya Palace Yangon (Floors - 34 / Height ≈ 122 m) 2019
ဦးထွန်းငြိမ်းလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Diamond Inya Palace ကွန်ဒိုက အထပ်ပေါင်း ၃၄ထပ်၊ အခန်းပေါင်း ၃၇၆ခန်း ပါဝင်ပြီး Penthouse ၈ခန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကျတဲ့ နေရာမှာ တည်ရှိပြီး သွားလိုတဲ့ နေရာကို မိနစ် အနည်းငယ်သာ ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမွန်သည့်အပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကလည်း ပြေပြစ်တာကြောင့် လူကြိုက်များတဲ့ ကွန်ဒိုတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။
အတွင်းအပြင်ဆေးများ၊ တံခါးများ၊ ပြတင်းပေါက်များ ၊ မျက်နှာကြက် ၊ ကြမ်းခင်း၊ မီးဖိုချောင် အသုံးအဆောင်များ အားလုံးက နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရေမြေ ရာသီဥတုနဲ့ အဆင်ပြေကိုက်ပြီး နေရထိုင်ရတာ လုံးဝအဆင်ပြေစေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရေကူးကန်နဲ့ အခြား Facilitiesတွေ လည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။ လူစီးဓာတ်လှေကား (၈)စီး၊ ကားပါကင်အတွက် ဓာတ်လှေကား (၃)စီး၊ ကုန်တင်ကုန်ချအတွက် (၂)စီး တပ်ဆင်ပေးထားပြီး ပထမထပ်ကနေ ငါးထပ်အထိကို ကားပါကင်ပြုလုပ်ပေးထားတာကြောင့် ကားအစီးရေ (၅၀၀)ကိုအဆင်ပြေစွာ ထားရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
2. Golden City, Block I Yangon (Floors - 33 / Height ≈ 118 m) 2018
3. Golden City, Block II Yangon (Floors - 33 / Height ≈ 118 m) 2018
4. Golden City, Block III Yangon (Floors - 33 / Height ≈ 118 m) 2018
5. Golden City, Block IV Yangon (Floors - 33 / Height ≈ 118 m) 2018
6. Lotte Hotel Yangon Residences Yangon (Floors - 29 / Height ≈ 104 m) 2017
7. Sedona Hotel2Yangon (Floors - 29 / Height ≈ 104 m) 2016
8. Kabar Aye Executive Residence Yangon (Floors - 27/ Height ≈ 97 m) 2016
*9. M Tower Yangon (Floors - 27 / Height ≈ 97 m) 2020
10. Thanlyin Star City I Yangon (Floors - 27 / Height ≈ 97 m) 2019
11. Thanlyin Star City II Yangon (Floors - 27 / Height ≈ 97 m) 2019
12. Thanlyin Star City III Yangon (Floors - 27 / Height ≈ 97 m) 2019
13. Paragon Residence Yangon (Floors - 27 / Height ≈ 97 m) 2018
14. Myanmar Plaza I Yangon (Floors - 27 / Height ≈ 97 m) 2015
15. Myanmar Plaza II Yangon (Floors - 27 / Height ≈ 97 m) 2015
16. Centrepoint Towers Offices Yangon (Floors - 25 / Height ≈ 90 m) 2012
17. Hilton Yangon Yangon (Floors - 25 / Height ≈ 90 m) 2014
*18. Kanbae Towers Condominium I Yangon (Floors - 25 / Height ≈ 90 m) 2020
*19. Kanbae Towers Condominium II Yangon (Floors - 25 / Height ≈ 90 m) 2020
*20. Kanbae Towers Condominium III Yangon (Floors - 25 / Height ≈ 90 m) 2020
* ကတော့ တည်ဆောက်ဆဲ ရာနှုန်းပြည့်မပြီးစီးသေးသည့် အဆောက်အဦးများဖြစ်ပါတယ်။
By Wyk (Myanmar Builders Guide)
Read 1385 times	Last modified on Sunday, 13 September 2020 15:12
20 tallest buildings
ကျပ်သန်း ၃၀၀၀ ဖြင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆိုလာဟိုက်ဒရောလစ် ဓာတ်အားပေးစက် တည်ဆောက်
စော်ကဲတံတားသစ်ကြီး တည်ဆောက်မှု ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီး
Centara က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဟိုတယ်အသစ် သုံးလုံး တည်ဆောက်မည်
မင်္ဂလာဈေး တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု နောက်ကျနိုင်
Soilbuild Construction က မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းများအတွက် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၉.၄ သန်း ထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံ